एक महिनामा कति बढ्यो तरकारीको मूल्य ?
सोमबार, कात्तिक १, २०७८ १०:५५:१६ युनिकोड
३१ भदौ २०७८ काठमाडौं । पछिल्लो समय दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य बढेको छ । मूल्यवृद्धिका कारण उपभोक्ता मर्कामा छन् । उपभोक्ताको भान्सामा दैनिक पाक्ने तरकारीको भाउले झन एक महिनामै आकाश छोएको छ ।
तरकारीको मूल्य १ महिनाको अवधिमा कति बढ्यो त ?
कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल विकास समितिले तयार पारेको साउन ३० देखि भदौ ३० सम्मको तरकारकीको थोक मूल्यसूचीलाई आधार मान्ने हो भने यो अवधिमा तरकारीको भाउ निक्कै बढेको छ । यो सूचीअनुसार साउन ३० गते करेला प्रतिकिलो १३ रुपैयाँमा विक्री भएको थियो । तर एक महिनाको अवधिमा यसको मूल्य साढे ५ गुणा बढेको छ । हो, एक महिनाअघि १३ रुपैयाँमा पाइने करेलाको थोक मूल्य अहिले ७० रुपैयाँ पुगेको छ ।
करेलाको मात्र हैन । अरु तरकारकीका भाउ पनि यस्तै गरी महँगो भएको छ । २५ रुपैयाँ प्रति केजीमा पाइने तने बोडीको भाउ भदौ ३० गतेसम्म आइपुग्दा झण्डै ३ गुणा बढेको छ । अहिले यसको मूल्य ७२ रुपैयाँ पुगेको छ ।
साउन ३० गते भिण्डी २१ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा विक्री भएको थियो, भदौ ३० सम्म आइपुग्दा भिण्डीको मूल्य ५६ रुपैयाँ पुगेको छ । ।
रायोको साग साउन ३० गते ७६ रुपैयाँ केजी थियो, भदौ ३० गतेसम्म आइपुग्दा १ सय ८६ रुपैयाँ पुगेको छ । साग १ महिनाको अवधीमा झन्डै दोब्बर बढेको देखिन्छ ।
पालुंगोको भाउ पनि त्यतिकै बढेको छ । साउन ३० मा ७६ रुपैयाँ केजीमा विक्री भएको साग भदौ ३० सम्म आइपुग्दा २ सय ६५ पुगेको छ । यो मूल्य साढे ३ गुणा हो । तोरीको सागको मूल्य पनि एक महिनाको अवधिमा ५२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल विकास समितिका अनुसार यो अवधिमा गोलभेडा, रातो आलु, सुकेको प्याज, सेतो मुला, स्कुस लगायतका तरकारीको मूल्य भने गत महिनाको तुलनामा केही घटेको देखिन्छ । तर समग्रमा भन्ने हो भने भाउ महँगो नै भएको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ ३१, २०७८, ०७:००:००
घट्यो कुखुराको मासुको मूल्य, बजारभाउ यस्तो छ
खाद्य व्यवस्था कम्पनीले चाडपर्वका लागि असोज १ गतेदेखि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्दै
हरियो तरकारीको मूल्य सातामै १ सय ७४ प्रतिशतसम्म बढ्यो
हरियो तरकारीको मूल्य साता दिनमै १ सय ७४ प्रतिशत सम्मले बढेको छ । केही दिनअघि लगातार रूपमा परेको वर्षाका कारण किसानले लगाएको तरकारी बाली नष्ट भएपछि मूल्य बढेको बताइएको छ । भिन्डी, लौका, घिउसिमी, स्थानिय काउली, घिरौंला, चिचिन्डो, भन्टा, करेलालगायत हरियो तरकारीको मूल्य बढेको पाइएको हो । पुरा पढ्नुहोस्
जुम्लामा स्याउ पाक्यो, बजारमा पठाउन सुरु
जुम्लामा उत्पादन भएको स्याउ नेपालका विभिन्न बजारमा पठाउन सुरु भएको छ। भदौको पहिलो सातादेखि स्याउ निर्यात गर्न सुरु भएको हो। स्याउ पाकेर खान लायकको भएपछि बजारमा बिक्रीका लागि निर्यात सुरु भएको कृषि विकास कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ। कार्यालयले सूचना जारी गरी निर्यातका लागि भदौको पहिलो सातादेखि खुला गरेको हो। पुरा पढ्नुहोस्